Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Sunny Seychelles Waxay Soo Dhaweysay Duulimaad Cusub oo Air France ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Seychelles waxay soo dhawaynaysaa Air France
Iyada oo ay ku salaamantihiin caado-dhaqameed biyo ah markii ay ka soo degtay gegida dayuuradaha ee Seychelles, diyaarada qaranka Faransiiska ee Air France, ayaa soo dhawayn diiran kala kulantay ku soo laabashadeeda jasiirada subaxnimadii Axada, Oktoobar 24, 2021, ka dib 18 bilood hakad.
Wafdi ka socda madaxda Seychelles ayaa soo dhaweeyay dib ugu soo laabashada diyaaradda Air France ee jasiiradda.
Seychelles ayaa laga saaray liiska cas ee Faransiiska, waxaana tani la filayaa inay sare u qaaddo soo-booqdayaasha.
Waxa kale oo ay gacan ka geysan doontaa hagaajinta deggenaanshaha kaliya maahan huteelada, laakiin sidoo kale guryaha martida yaryar iyo dhismooyinka iskood wax u cunta iyo soo-booqdayaasha badan ee Praslin, La Digue, iyo jasiiradaha kale.
203 marti ah oo ka soo duulayay Faransiiska duulimaadkii ugu horeeyay ayaa la siiyay dhadhanka soo dhawaynta Creole markii ay ka heleen xasuus maxalli ah Waaxda Dalxiiska waxayna la kulmeen ruuxa firfircoon ee Seychelles iyada oo loo marayo muusig dhaqameed toos ah.
Si loo xuso soo celinta xidhiidhka tooska ah ee qaranka jasiiradda mid ka mid ah suuqyadeeda dhaqameed ee muhiimka ah, iyo Seychelles oo la ansixiyay "Liste Orange" ee socdaalayaasha Faransiiska, wafdi ka kooban Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Mr. Sylvestre Radegonde; Safiirka Faransiiska, Mudane Dominique Mas; Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Mrs. Sherin Francis; iyo Agaasimaha Guud ee Suuqgeynta Meesha, Mrs. Bernadette Willemin ayaa goobjoog ka ahaa soo dhaweynta imaatinka.
Mrs. Willemin waxay faallo ka bixisay in ka saarista Seychelles ee liiska cas ee Faransiiska iyo soo celinta Air France aan la filaynin oo kaliya inay kor u qaaddo soo-booqdayaasha, waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta deggenaanshaha kaliya maaha hoteelada, laakiin sidoo kale guryaha martida yaryar iyo xarumaha cuntada Keen booqdayaal badan Praslin, La Digue, iyo jasiiradaha kale.
"In aan Air France ku soo celinno xeebaheenna waa waqti aad u wanaagsan meesha aan ku soconno. Faransiiska ayaa weli ah suuq si fiican noogu shaqaynaya in kasta oo aanu jirin duulimaadyo toos ah iyo xaqiiqda ah in aanu ku jirnay liiska cas. Iyada oo la heli karo duulimaad toos ah Seychelles laga bilaabo maanta, waxaan saadaalineynaa in suuqa Faransiiska uusan ku fiicnaan doonin kaliya marka loo eego soo-booqdayaasha laakiin sidoo kale inuu dib u helo booskiisa seddexda suuq ee ugu sareysa. ”
Aragtida ayaa ah mid wanaagsan, ayay tiri Mrs. Willemin. "Waxaan ku faraxsanahay in lixda duulimaad ee ugu horreeya ay filayaan culeys buuxa oo rakaab ah iyo warbixinno ka imaanaya shuraakadayada ganacsiga safarka ee Faransiiska, kuwaas oo kor u qaaday dhiirrigelintooda meesha ay u socdaan, in ballan-qaadkooda hore ee Seychelles ay caafimaad qabaan oo ay u muuqdaan kuwo wanaagsan. Hawl-wadeennadayada dalxiiska ee gudaha, gaar ahaan xarumaha yaryar iyo jasiiradaha kale ee aan ahayn Mahé, way tebeen martidayada Faransiiska oo aad ugu faraxsan inay soo dhaweeyaan iyaga."
Danjire Dominique Mas wuxuu xusay in xiriir toos ah oo la yeesho ay gacan ka geysan doonto fududeynta safarka dadka safarka ah ee Seychelles.
"Horumarka xaaladda fayodhowrka ee labada waddan ayaa runtii gacan ka geysatay dib u bilaabashada safarka u dhexeeya Faransiiska iyo Seychelles. Go'aanka ah in Seychelles lagu dhejiyo 'liiska orange' iyo imaatinka Air France maanta waxay ku celinaysaa kalsoonida labada dawladood ee ku aaddan shaqada wanaagsan ee tallaabooyinkooda badbaadada. Waxaan ku faraxsanahay inaan duullimaad toos ah uga soo laabano garoonka diyaaradaha ee Paris Charles De Gaulle maadaama ay hadda u fududahay dadka socotada ah ee Faransiisku inay ku tagaan Seychelles,” ayuu yiri safiirka Faransiiska.
Seychelles, oo dib ugu laabatay waxqabadyada xayaysiinta jirka bishii Sebtembar, ayaa dhawaan ka qaybgashay bandhigga 2021 IFTM Top Resa, mid ka mid ah bandhigyada ganacsiga caalamiga ah ee ugu waaweyn ee loogu talagalay dalxiiska Faransiiska, ayay tiri Mrs. Willemin. "IFTM Top Resa waxay noo ahayd dhacdo rajo leh markii aan ogaanay xiisaha dib u cusboonaysiinta ee aan u socono oo noo ogolaatay inaan kordhino muuqaalkayaga warbaahinta Faransiiska."
Seychelles ayaa diiwaangelisay 43,297 booqasho oo ka yimid Faransiiska sanadka 2019, taasoo ka dhigaysa suuqa labaad ee ugu sarreeya waddanka sanadkaas. Ilaa hadda sanadka 2021, 8,620 booqdayaal ah oo ka yimid Faransiiska ayaa u safray jasiiradaha. Soo laabashada Air France, Seychelles waxaa hadda u adeega 11 shirkadood oo diyaaradeed.